Esi kpochapụ oghere nke ngwa na Android | Gam akporosis
Esi kpochapụ oghere nke ngwa na gam akporo
Aaron Rivas | | Nkuzi
Na-enweghị anyị n’ahụ ya, ebe nchekwa nke ngwa gam akporo anyị nwere ike ijupụta, n’agbanyeghi na anyị anaghị etinye ngwa ọhụụ, budata egwu, faịlụ, onyonyo ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ma gịnị kpatara nke a? Ọfọn, isi ihe nwere ike ịbụ igbu nke ngwa mkpanaaka. Oge ọ bụla anyị mepere ma gbaa ọsọ nwa oge faịlụ na-emekarị kere na-ewe ohere na ebe nchekwa ngwaọrụ; ndị a na-echekwa.
Na nke a, anyị na-akọwa otú i nwere ike ikpocha cache gị gam akporo ngwa. Maka nke a, anyị ga-enwe ohere ọzọ iji budata ihe anyị chọrọ ma ọ bụ see foto, dekọọ vidiyo ma ọ bụ ndetu. Nọgide na-agụ!
Cache bụ ebe nchekwa inyeaka. A na-echekwa ụdị faịlụ niile nke nwa oge na ya, nke bụ ndị ekepụtara mgbe anyị na-agba ngwa ma ọ bụ egwuregwu.
Nwa oge faịlụ ndị adịghị mkpa maka kwesịrị ekwesị ịrụ ọrụ nke ngwa, ọbụnadị maka ọrụ ya dị mfe. N'agbanyeghị nke ahụ, ha na-emetụta ogbugbu nke ndị a n'ụzọ dị mma, ebe sistemu ahụ na-eji ha "echeta" usoro dị mfe iji mee ka ha rụọ ọrụ. Otú ọ dị, mgbe a na-echekwa ọtụtụ data n'ime oghere, ọ ga-adị mma ka ihichapụ ya ma ọ bụ, kama, kpochapụ oghere nke ngwa ndị a.
Esi kpochapụ oghere nke ngwa na gam akporo gị
Usoro iji hapụ ohere na ekwentị gị site na ihichapu oghere ngwa Ọ dị nnọọ mfe. Nke mbu, anyi kwurula na o nwere ike igbanwe ntakịrị site na ihe nlere nke ekwenti, akara, nkpuchi nke ndi mmadu na Android, yana nomenclature nke okwu a. Nzọụkwụ ị ga - agbaso bụ:
Na ekwentị gam akporo anyị, anyị na-aga Nhazi o Ntọala.
Ozugbo e, na ngalaba nke Ngwaọrụ, anyị na-aga Aplicaciones. Anyị ga-achọpụta na ngwa niile awụnyere na arụnyere na sistemụ ga-apụta.
Anyị họrọ otu ngwa wee banye Oghere nchekwa.
Nhọrọ ndị ga - apụta: otu ịgbanwe ọnọdụ nke ngwa ahụ, ma ọ bụ na ebe nchekwa ngwaọrụ ma ọ bụ microSD; ọzọ iji wepu data niile na ya; na nke ikpeazụ, nke bụ ebe anyị ga-enye gị, ihichapụ oghere, nke kwuru hoo haa Wepu ihe nchekwa.
Anyị na-akwado n'ịrụ usoro a na ngwa ngwa ọ bụla nke ngwaọrụ ma na-eme ya oge niile, iji zere mkpọchi ebe nchekwa ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Esi kpochapụ oghere nke ngwa na gam akporo
Atụmatụ Razer ekwentị 2 Razer
Oppo K1: oghere dị n'etiti ọhụụ na onye na-agụ akara mkpisiaka abanye na ihuenyo